2 Ɛbae sɛ eyi akyi no, Dawid bisaa Yehowa+ sɛ: “Memforo nkɔ Yuda nkurow no bi mu anaa?” Na Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Foro kɔ.” Na Dawid san bisae sɛ: “Ɛhe na memforo nkɔ?” Na ɔkae sɛ: “Kɔ Hebron.”+ 2 Ɛnna Dawid foro kɔe, ɔne ne yerenom baanu no, Yesreelni Ahinoam+ ne Abigail,+ Karmelni Nabal yere no. 3 Na Dawid de mmarima+ a wɔka ne ho no nso kɔe, obiara ne n’abusua, na wɔkɔtenatenaa Hebron nkurow mu. 4 Ɛnna Yuda+ mmarima baa hɔ bɛsraa+ Dawid ngo sii no Yuda fie so hene.+ Na wɔbɛka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Yebes-Gileadfo na wosiee Saul.” 5 Enti Dawid tuu abɔfo kɔɔ Yebes-Gileadfo+ nkyɛn kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yehowa nhyira mo+ sɛ moayɛ mo wura Saul adɔe+ sɛɛ, na moasie no.+ 6 Na afei Yehowa ne mo nni no adɔe+ ne nokwaredi so, na me nso me ne mo bedi no papayɛ mu, sɛ́ moayɛ eyi nti.+ 7 Enti monhyɛ mo nsam den na munnya akokoduru,+ efisɛ mo wura Saul awu, na me na Yuda fie asra me ngo de me asi wɔn so hene.”+ 8 Afei Saul asraafo no sahene, Ner ba Abner,+ faa Saul ba Is-Boset,+ na ɔde no twa kɔɔ Mahanaim,+ 9 na osii no hene wɔ Gilead+ ne Asurifo ne Yesreel+ ne Efraim+ ne Benyamin+ ne Israel nyinaa so. 10 Saul ba Is-Boset bedii Israel so hene no, na wadi mfe aduanan, na odii hene mfe abien. Yuda fie+ nko na wodii Dawid akyi. 11 Nna dodow a Dawid de dii Yuda fie so hene wɔ Hebron no yɛ mfe ason ne asram asia.+ 12 Akyiri yi, Ner ba Abner ne Saul ba Is-Boset nkoa fii Mahanaim+ kɔɔ Gibeon.+ 13 Na Seruia+ ba Yoab+ ne Dawid nkoa nso fii adi, na akyiri yi wɔn nyinaa kohyiae wɔ Gibeon ɔtare no ho; wɔtenatenaa ase, eyinom wɔ ɔtare no fã ha, na eyinom nso wɔ ɔtare no fã ha. 14 Afei Abner ka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Yɛmma mmerante no nsɔre ɛ, na wɔmfa nsi ani mma yɛnhwɛ.” Ɛnna Yoab kae sɛ: “Wɔnsɔre ɛ.” 15 Enti wɔsɔre kan wɔn ho, na wokohyiae; Benyamin ne Saul ba Is-Boset+ nkurɔfo yɛ dumien, na Dawid asomfo nso yɛ dumien. 16 Sɛ oyi so ne yɔnko ti a, na ɔde ne nkrante awɔ ne mfem, na wɔn nyinaa atotɔ prɛko. Na wɔbɛfrɛɛ hɔ Helkat-Hasurim a ɛwɔ Gibeon.+ 17 Na ntɔkwaw no mu yɛɛ den yiye saa da no, na Abner+ ne Israel mmarima dii nkogu wɔ Dawid nkoa no anim. 18 Saa bere no, na Seruia+ mmabarima baasa no, Yoab+ ne Abisai+ ne Asahel+ wɔ hɔ; ná Asahel nan ase yɛ hare sɛ adowa+ a ɔwɔ wuram. 19 Na Asahel tu sãã Abner, na wampɛ sɛ ɔman fi Abner akyi kɔ nifa anaa benkum. 20 Ɛnna Abner twaa n’ani hwɛɛ n’akyi kae sɛ: “Ɛyɛ wo Asahel anaa?” Na obuae sɛ: “Ɛyɛ me.” 21 Ɛnna Abner ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa w’ani kyerɛ nifa anaa benkum kɔkyere mmerante no biako na yi+ nea wubenya wɔ ne ho biara fa.” Nanso Asahel ampɛ sɛ ogyae n’akyi di. 22 Ɛnna Abner san ka kyerɛɛ Asahel sɛ: “San fi m’akyi kɔ. Dɛn nti na woreyɛ ama mabɔ wo ahwe fam yi?+ Anka mɛyɛ dɛn apagyaw m’ani ahwɛ wo nua Yoab?” 23 Nanso wampɛ sɛ ɔsan. Enti Abner de ne peaw no ti wɔɔ ne yam+ ma peaw no puee n’akyi, na ɔhwee fam wui ɛhɔ ara. Na ɛbae sɛ obiara du faako a Asahel hwee fam wui no a, na wagyina hɔ.+ 24 Ɛnna Yoab ne Abisai tiw Abner. Owia rekɔtɔ no, wobeduu Amma koko a ɛda Gia anim, Gibeon+ sare so kwan so no so. 25 Na Benyaminfo no boaboaa wɔn ho ano gyinaa Abner akyi, na wɔyɛɛ kuw biako kogyinaa koko bi atifi. 26 Ɛnna Abner frɛɛ Yoab kae sɛ: “Enti nkrante bedi nam+ daa? Wunnim sɛ awerɛhow na ɛde bɛba?+ Ɛnde da bɛn na wobɛka akyerɛ nnipa no sɛ wɔnsan mfi wɔn nuanom akyi?”+ 27 Ɛnna Yoab kae sɛ: “Sɛ́ nokware Nyankopɔn te ase yi,+ sɛ woankasa+ a, anka gye anɔpa na nnipa no bɛsan, ama obiara agyae ne nua akyidi.” 28 Enti Yoab hyɛn abɛn+ no, na nkurɔfo no nyinaa gyinae, na wɔantiw Israel bio, na wɔanko bio. 29 Abner ne ne mmarima nso siim kɔfaa Araba+ anadwo no nyinaa, na wokotwaa Yordan,+ na wɔnantew faa bon no mu nyinaa kopuee Mahanaim.+ 30 Yoab de, ɔsan fii Abner akyi, na ɔboaboaa nnipa no nyinaa ano. Ná wɔahwere Dawid nkoa no mu nnipa dunkron ne Asahel. 31 Dawid nkoa no kunkum Benyaminfo ne Abner nkurɔfo no; mmarima ahasa aduosia na wowuwui.+ 32 Na wɔfaa Asahel+ kosiee no ne papa amusiei+ wɔ Betlehem.+ Ɛnna Yoab ne ne mmarima no nantew anadwo no nyinaa, na ade kyee wɔn wɔ Hebron.+